အဆိုပါကတော့တိုက်ရိုက်ပွဲ Hacks - အဆိုပါနေ့၏ကတော့
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သို့သွားရတဲ့အခါသင်ရယျ ယင်းကတော့တိုက်ရိုက်စည်းဝေးကြီးတစ်ခုကို Hacks.
၏ timespan တွင်3ရက်ပေါင်း, 17 ယင်းကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အများဆုံးမှတ်မိမျက်နှာများ၏အတူ get 3,000 လူနှင့်၎င်းတို့၏ကုန်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်များကိုလေ့လာသင်ယူလိုသောဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသမီးများကို.
အတွင်းအဖြစ်အပျက် 2018 စက္ကန့်တစ်ဦးအမှု၌တက်ရောက်ရောင်းထွက်စေတဲ့စုစုပေါင်းစံချိန်အနိုင်အထက်ခဲ့သည်.
အဆိုပါထဲက 52,000 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတက်ကြွစွာကတော့အသုံးပြုသူများသည်, ရုံအလွန်သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းစစ်မှန်တဲ့ပညာရှင်များနှင့်အတူစားသုံးတယ်.
အောက်မှာ Filed: Funnel Hacks အတူ Tagged: funnel hacks live